Thwebula WiFi Manager 3.5.4.2 – Vessoft
Thwebula WiFi Manager
Manager WiFi – isofthiwe ukubona, ukuxhuma kanye aphathe amanethiwekhi WiFi. Isofthiwe iqukethe iziteshi sokuqhafaza radar elibonisa nokuhlolwa izinga uxhumano kanye isimo kunethiwekhi etholakalayo. Manager WiFi ikuvumela ukuba ngokwezifiso uhla search, sibonise amanethiwekhi ezifihliwe futhi ngokuzenzakalelayo ushintshele inethiwekhi isignali umhlabeleli. Futhi isofthiwe has a widget ukuthi ubonisa ulwazi mayelana isimo inethiwekhi ngqo screen main of the device. Manager WiFi has a esibonakalayo elula enembile kanye themes ezahlukene ukuhlobisa.
Ukuthola kanye ukuxhumana amanethiwekhi WiFi
Ibonisa ulwazi mayelana amanethiwekhi atholakalayo
Inani elikhulu amathuluzi oyifisayo
Amazwana on WiFi Manager:
WiFi Manager Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... Microsoft Office Mobile 15.0.4522.2000